HIBRU 6 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (HI 6)
Ya mere ka anyị hapụtụ ozizi ndị ahụ a na-ezi ndị kweere na Kraịst ọhụrụ, ma ka anyị lenye anya nꞌokwu ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ. Ọ kwesịghị ka anyị malitekwa tọwa ntọ ala gbasara inwe okwukwe na Chineke, na inwe nchegharị site na ndụ ọjọọ ndị ahụ na-eweta ọnwụ.
Ọ dịghị mkpa na a ga-akụziri unu ihe banyere ime baptizim, onyinye nke Mmụọ Nsọ, mbilite nꞌọnwụ na ikpe ebighị ebi.
Site nꞌike Chineke, anyị ga-aga nꞌihu ikwu ihe ọzọ.
Ọ bụ ihe rara ahụ ime, ka ụfọdụ laghachikwute Chineke, ma ọ bụrụ na ha aghọtala ozi ọma ahụ, detụkwa onyinye ahụ si nꞌigwe ire. Ọ bụrụ na ndị a eketakwala oke nꞌime Mmụọ Nsọ.
Ma ọ bụrụ na ha anụrụla ụtọ nke okwu Chineke, na ebube ọ dị bụ ike nke ụwa gaje ịbịa.
Ọ bụrụ na ndị dị otu a ajụ Chineke, ọ rara ahụ imekwa ka ha chegharịa. Ọ pụghị ime! Ihe ha mere mgbe ha jụrụ Chineke, bụ ịkpọgide Ọkpara Chineke nꞌobe ọzọ, na imekwa ya ihe ihere nꞌihu ọha.
Mgbe mmiri zokwasịrị ubi mmadụ, nke mere ka ubi ahụ mịa ezi mkpụrụ, Chineke agọziela ubi ahụ.
Ma ọ bụrụ na ubi ahụ epuo nanị ogwu na ahihia, kama ịmị mkpụrụ, ubi a abaghị uru. Ihe a ga-eme ya bụ ịkpọ ya ọkụ.
Ma echeghị m na ọ bụ unu ka okwu a dịrị ụmụnna m. Unu bụ ndị kwere ekwe, ya mere unu na-amị ezi mkpụrụ nke ya na nzọpụta unu so bịa.
Nꞌihi na Chineke bụ onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Olee otu ọ ga-esi chefuo ọrụ nile unu rụụrụ ya? Olee otu ọ ga-esi chefuo ịhụnanya unu gosiri nꞌihi ya site nꞌinyere ibe unu ndị kwere ekwe aka?
Ihe ịma atụ bụ nkwa nke Chineke kwere Eberaham. Mgbe Chineke kwere Eberaham nkwa, ọ ṅụrụ iyi. O jiri aha ya, Chineke, ṅụọ iyi, nꞌihi na ọ dịghị onye ọzọ dị ukwuu karịa ya.
Ọ ṅụrụ iyi sị “Nꞌezie aga m agọzi gị. Aga m eme ka ị ghọọ nna nke mba dị ukwuu.”
Anyị na-eji ndị dimkpa ṅụọ iyi ka anyị mezuo nkwa anyị kwere. Nkwa e kwere nꞌụzọ dị otu a enweghị ịrụ ụka.
Jisọs eburula anyị ụzọ laa nꞌeluigwe. Ebe ahụ ka ọ na-arịrịọ anyị arịrịọ dị ka onyeisi nchụaja anyị ruo mgbe ebighị ebi. Ọnọdụ ya dịkwa dị ka nke Melikizedeki.